Waa sidee xaalada bulshada kudhaqan degmada Araarso ee Gobolka Jarar. | ogaden24
Waa sidee xaalada bulshada kudhaqan degmada Araarso ee Gobolka Jarar.
Shacabka kudhaqan dagmada Araarso oo u badan bulsho Xoolo dhaqata ah gaar ahaan lo’ley ah sidoo kalana ah Beeraley, ayay Xoolahoodu kutiirsan yihiin dhulka seeraha looyaqaano iyo dhul Beereedka oo xiliyada Jiilaalka ay Lo’da ugaga baxdo.
Hadaba wariyaha Ogaden24 ee magaalada Jigjiga oo socdaal Gaaban kutagay magaalada Araarso ayaa soo sheegaya in ciidamada Woyanaha iyo maleeshiyaadka lashaqeeya ay mudo 2-bilood kahor ah Gubeen dhul Beereedka iyo dhulkii seerayaasha ama daaqsinka ah ee bulshada Xoola dhaqatada ahi xiliga Jiilaalka Lo’da Gashan jireen.
Gubitaanka dhulka degmada Araarso ayaa kadambaysay kadib markii shacabka deegaanku ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan Xoolo Gibir ah oo maamulka Woyanuhu kusoo rogay, waxaana haatan xaalad Qalafsan dadka iyo duunyadii kudhaqnaa duleedada degmada Araarso, kadib markii ay Xoolihii waayeen waxay Afka Galiyaan Baad ah.
Lo’dii ayaa daadsan Hareeraha wadada mana jirto haba yaraadee wax Goosin ah oo Lo’daasi Afka Galiso ilaa 15-km oo dhinacyada Laamiga ah, ayaa waxaad ku arkaysaa Lo’dii oo iska daadsan oo dadkii lahaa qaarna Ku dul wareegayaan qaarna isaga tageen, kadib markii ay ka Quusteen ayuu yidhi wariyaha Ogaden24 ee magaalada Jigjiga.
Sida uu wariyuhu kusoo waramayo shacabka magaalada ayay saamaysay dhibaatada kadhalatay Gubistii dhul beereedka iyo daaqsimeedkii duleedada magaalada ahaa, waxaana magaalada aad uga muuqda diifta iyo rafaadka ay kadhex dhaleen Gubista deegaankii Hodanka ahaa ee dad iyo duunya ba u baxsan jireen xiliyada adag sida kan hada lagu jiro oo kale.
Magaalada Araarso ayaa laciir-ciiraysay dadkii Xoola dhaqatada ahaa oo kusoo Jabay kuwaasi oo Neefafka usoo hadhay kula soo cararay magaalada, si ay ugu helaan Raashin iyo wixii kale ee lamid ah oo ay ku bad baadsan karaan Sacaha usoo Hadhay.